Siri manatsara ny famaliana fanontaniana ara-pahasalamana, fa mila fanatsarana | Vaovao IPhone
Nilaza ny mpikaroka any amin'ny oniversite maro any Etazonia fa nanatsara ny valinteniny i Siri manoloana ny vonjy taitra ara-pahasalamana sy ny krizy manokana nandritra ny taona lasa, nefa mbola tsy nihatsara kokoa. Ny fandinihana iray natao tany Stanford, herintaona lasa izay, dia nahita fa toy izany ireo mpanampy hendry SiriI Cortana na i S Voice dia tsy teo an-toerana rehefa mila fanampiana ara-pitsaboana, mamaly amin'ny "fanehoan-kevitra mirongatra" na manao fikarohana amin'ny Internet rehefa nisy nilaza zavatra toy ny "Kivy aho." Adam Miner, mpanoratra ny fanadihadiana dia nilaza fa nihatsara ny raharaha nanomboka teo.
Raha ny filazan'ny Miner, «ankehitriny Siri dia manaiky ny fanambarana toy ny hoe 'voaolana aho' ary manolo-kevitra ny handeha ho any amin'ny Hotline National Assautl Hotline«, Zavatra izay, farafaharatsiny amin'ny fotoana nanoratana ity lahatsoratra ity, dia tsy manome valiny mitovy amin'izany raha miteny Espaniola isika. Toy ny mahazatra, na mihoatra ny tiantsika, ny fanatsarana ny zavatra rehetra mifandraika amin'i Apple dia tonga alohan'ny Etazonia, avy eo mankany amin'ny firenena toa an'i Canada sy Aostralia ary avy eo amin'ny sisa amin'ny tany.
Siri dia nihatsara hatrany, saingy mbola tsy nanao zavatra bebe kokoa
Miner dia maniry orinasa hamorona fenitra hamantarana ny vonjy taitra sy hanome valiny mety:
Ny ekipanay dia nahita azy io ho toy ny fotoana ahafahana mamorona maso virtoaly mahatsapa fahasalamana. Ny fahazoana an'io olona io amin'ny loharano mety dia fandresena ho an'ny rehetra.
Izao dia izao, tsy maintsy mihatsara ny mpanampy virtoaly rehetra. Ho an'i Siri, tsy mila manatsara ny valin'ny fahasalamanao fotsiny ianao; Tsy maintsy manatsara ny fahaizany mamorona ihany koa izy, izay manampy azy hitadidy na afaka hanaraka ny tadin'ny resaka. Ity dingana ity dia nandray dingana lehibe noho ny fandefasana SiriKit sy SDK hafa izay ahafahantsika, ohatra, mandefa WhatsApp mangataka amin'i Siri momba izany.
Inona no tianao ho vitan'i Siri amin'ny ho avy?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Siri » Manatsara ny famaliana ireo fanontaniana ara-pahasalamana i Siri, saingy mila fanatsarana